Sheeko Cusub: Philippe Coutinho Oo Qaadanaya Dhalashada Portugal Si Uu Barcelona Uga Caawiyo In Ay Man United & Chelsea Ku Garaacdo Saxiixa Xiddig Ay Isku Baacsanayaan – Kooxda.com
Home 2018 February Spain, Wararka Maanta Sheeko Cusub: Philippe Coutinho Oo Qaadanaya Dhalashada Portugal Si Uu Barcelona Uga Caawiyo In Ay Man United & Chelsea Ku Garaacdo Saxiixa Xiddig Ay Isku Baacsanayaan
Sheeko Cusub: Philippe Coutinho Oo Qaadanaya Dhalashada Portugal Si Uu Barcelona Uga Caawiyo In Ay Man United & Chelsea Ku Garaacdo Saxiixa Xiddig Ay Isku Baacsanayaan
Philipe Coutinho ayaa lagu soo waramayaa in uu qorshaynayo in badalo dhalashadiisa bilo yar ka hor koobka adduunka lagu qaban doono dalka Russia.
Xiddiga cusub ee kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho ayaa lagu soo waramayaa in uu badalayo dhalashadiisa isla markaasna qaadanayo dalasho Portugal ah si uu Barcelona uga caawiyo in ay Man United iyo chelsea ku garaacdo saxiixa xiddig ay isku baacsanayaan adeegiisa.
Coutinho ayaa doonaya in uu qaato dhalashada dalka Portugal si uu kooxdiisa Barcelona uga caawiyo in ay hesho saxiixa xiddiga reer Brazil ee Arthur.
25 jirka reer Brazil ayaa ka mid ah 3 xiddig oo aan u dhalan dalka Yurub kana tirsan kooxda Barcelona taas oo la macno ah in aan Barcelona loo ogolayn in ay kooxdeeda ku soo darto xiddig kale oo aan u dhalan Yurub.
Laakiin Coutinho ayaa xaqiijiyay in uu dhalashadiisa u badali doono dalka Portugal oo ah dalka ay ka soo jeedo xaaskiisa Aine oo ay is qabeen muddo 3 sano ah.
Si kasta ha ahaatee waxa uu u ciyaari karaa xulka qarankiisa Brazil hadii uu dhalashada Portugal qaato xitaa.
Barcelona ayaa sidoo kale kooxda ku haysata Paulinho iyo Yerry Mina waxana lagu soo waramayaa in ay ku dhawdahay in ay dhamaystirto saxiixa xiddiga reer Brazil ee Arthur oo 21 jir ah.